Ady amin’ny kolikoly: voafidy ho filankevitry ny UA, Andriamifidy Jean Louis | NewsMada
58 personnes positives au Covid-19 : le nombre de cas contact augmente
Niantso fahamailoana ny filoha Rajoelina: efatra indray ireo tratran’ny coronavirus ka zazalahy 13 taona ny iray
Coronavirus : la barre des 50 cas confirmés franchie
Fitiliana tsimokaretina: 11 ny tranga vaovao, tafakatra 57 ireo tratry ny coronavirus
Ady amin’ny kolikoly: voafidy ho filankevitry ny UA, Andriamifidy Jean Louis
Par Taratra sur 04/04/2019
Sehatra sy dingana avoavo kokoa. Tanterahina any Tanzania ny fivorian’ny filankevitra eo anivon’ny Vondrona afrikanina (UA) misahana ny ady amin’ny kolikoly. Nanamarika izany ny nanaovan’ny tale jeneralin’ny Bianco fianianana amin’ny naha voafidy azy ho mpikambana eo anivon’ny filankevitry ny fakan-kevitra eo anivon’ny UA. Hisahana ny faritr’i Afrika atsinanana ny tenany, manomboka izao. Anisan’ny rafitra iray eo anivon’ny UA ahitana mpikambana 11 io filankevitra io ary manana fe-potoam-piasana roa taona azo avaozina. Anisan’ny mason-tsivana takina amin’ireo mpikambana ny fandraisana andraikitra eo amin’ny ady amin’ny kolikoly, ny fahaiza-manao, ny fahaiza-manentana hisorohana mialoha ny kolikoly… Anisan’ny andraikitra iantsorohan’ireo mpikambana ny fampirisihina ny tokony handaniana ny lalàna momba ny ady amin’ny kolikoly sy ny hampiharana izany aty amin’ny kaontinantaben’i Afrika.
Hifarana ny volana jona ny fe-potoam-piasana
Eo koa ny fanoloran-kevitry ny governemanta manoloana ny ady atao amin’ny fihanak’io aretina iray manimba ny fanjakana tsara tantana io. Manao ny tatitra rehetra eo anivon’ny mpanatanteraka eo anivon’ny UA ny asa vita sy ny fandrosoan’izany isak’ireo firenena mpikambana ary koa ny fampiharana ny fifanarahana ao amin’ny UA momba ny fisorohana mialoha ny kolikoly ny mpikambana eo anivon’ity filankevitra ity.
Tsiahivina fa hifarana amin’ny 24 jona 2019 izao ny fe-potoam-piasan’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis. Na izany aza anefa, mbola manohy ny ady amin’ny kolikoly ny tenany, saingy amin’ny endrika hafa sy iraka manokana ataony, manomboka izao, eo anivon’ny UA.
Les photos du jour 02 Avril 2020 02/04/2020
Echos des régions 02/04/2020
Prévention du coronavirus à Antsohihy : les autorités locales renforcent les mesures de protection 02/04/2020
Sofia : des touristes se réfugient à Nosy Lava 02/04/2020
Pénurie : la production de 45.000 masques par jour est lancée 02/04/2020